Hoa ban | Cây cảnh - Hoa cảnh - Bonsai - Hòn non bộ - Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Hoa ban | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Hoa ban | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
I-Bauhinia variegata, ekwaziwa ngokuba yi-striped cow’s claw, luhlobo lwesityalo esidubula iintyatyambo kusapho lwe-Fabaceae, inzalelwane yase-Asia-mpuma ye-Asia, ukusuka kumazantsi e-China, entshona ukuya e-Indiya. Ngokuqhelekileyo abantu bawubiza ngokuba ngumthi we-ban, nangona kunjalo, ngenxa yokuba kukho iintlobo ezininzi ze-genus enye enegama elithi ban, umthi we-banyan uhlala ubizwa ngokuba ngumbala wentyatyambo, njengentyatyambo emhlophe emhlophe, i-pink banyan tree, i-purple banyan. umthi.
Umthi weBanyan: Isityalo semithi esincinci ukuya kwephakathi, esifikelela kwi-10-12 m ubude, siyinxalenye yemithi evuthulukayo kwixesha elomileyo.
Amagqabi awo amalunga ne-10-20 cm ubude kunye nobubanzi, arawndi kwaye ajijelwe emazantsi kunye nencam yencakuba. Ayinanwele phezulu, ayinaboya emazantsi
Iintyatyambo zayo ziyabonakala, zineepetali ezi-5 ezinombala obomvu, opinki ophaphathekileyo ukuya kumhlophe, 8-12 cm ububanzi.
Isiqhamo yi-pea 15-30 cm ubude, iqulethe imbewu eninzi ngaphakathi.
Izitamu zinencasa eswiti, zitsala izinambuzane ezininzi, ngakumbi iintlobo ezitya ubusi ezifana neenyosi kunye namabhabhathane. Iintyatyambo ze-Ban ziqhakaza kakhulu kwaye zihle kakhulu ekuqaleni kuka-Matshi, ukuya ekuqaleni kuka-Epreli, iintyatyambo ziqala ukubola. Xa utyatyambe ngokupheleleyo, umthi we-banyan ukhangeleka ngathi uneentyantyambo kuphela kodwa awunamagqabi.
intyatyambo Ibhodi emhlophe
Sisityalo sokuhombisa esithandwayo kwiindawo ezininzi zemozulu yetropikhi kunye ne-subtropical, ekhuliselwe iintyatyambo zaso ezinevumba elimnandi. Nangona kunjalo, kwezinye iindawo luhlobo oluhlaselayo ngenxa ye-hydrosynthesis kunye nokuziqhelanisa neendawo zokuhlala ezintsha. EVietnam, ikhula ikakhulu kwindawo ekumntla-ntshona woMntla.
Intyatyambo iyatyiwa, eIndiya ixolo lisetyenziswa njengeyeza lokunyanga amanxeba, ukunyanga izifo zolusu, izilonda nomculo. Amahlumela awomileyo asetyenziselwa ukunyanga isifo segazi, isifo sohudo kunye neentshulube; i-decoction yejusi yeengcambu ukunyanga i-flatulence, isisu esibuhlungu kunye ne-snakebite venom. Umthi wawusetyenziselwa ukwenza ifanitshala eqhelekileyo.
Kubantu baseMntla-ntshona, iibhalkhoni ezidubulayo sisitya esixabisekileyo “sentyatyambo kunye nemifuno”. I-Hoa ban ipheka isuphu, yenza i-mannequins, idiphu ngeviniga, i-chili kunye ne-bamboo amahlumela amuncu … I-Hoa ban ikwaliyeza elixabisekileyo lokunyanga ukhohlokhohlo olomileyo okanye umqala obuhlungu kakhulu. Abanye abantu basebenzisa amagqabi kunye namathupha amancinci omthi we-yellow star banyan ukunyanga isifo segazi ngokufanelekileyo. Kwitreyi yoNyaka oMtsha, abantu baseThai bahlala bebeka amagqabi amahle eentyatyambo esibingelelweni ngokungathi banombulelo kubazali abangasekhoyo. Abantu baseThai bacinga ukuba, iibhalkhoni ezidubulayo ubunyulu bububungqina bokuhlonela abazali kunye nophawu lothando phakathi kwamakhwenkwe namantombazana.
Iirozi ezipinki ezikhanyayo
iibhalkhoni ezidubulayo Ubuhle basentwasa hlobo, umnyhadala wokuvunwa kweentyatyambo ngokwesiko laseThai elimhlophe. Ngaphambili, iHoa Ban Festival yayingowona mnyhadala mkhulu waseThailand, umnyhadala wothando, wolutsha…
iibhalkhoni ezidubulayo yenye yeemveliso zeentaba zoMntla-ntshona. Kangangamawaka ezizukulwana, intyatyambo evaliweyo ingene ngokwendalo kubomi benkcubeko nangokomoya babantu baseMntla-ntshona, ngakumbi abo bangabeqela lolwimi lwesiTay-Thai. Kubantu baseThai, mhlawumbi akukho mntu ungazange abe namava olutsha, kunye nemidlalo enomdla yokukha iintyatyambo kunye nokucula iingoma zothando. Kwinkumbulo yalabo bakude, kunye ne-nostalgia yedolophana, kubathandekayo, kukho ukulangazelela umbala weentyantyambo ezitsha, ezimhlophe kunye nepinki rhoqo entwasahlobo.
iibhalkhoni ezidubulayo yavela kwii-epics, iintsomi kunye namabali abaliswa ngumlilo ubusuku bonke abantu baseMntla-ntshona. Iintsomi zithi mandulo, iintyatyambo zazimhlophe kuphela. Ekubeni uMai, intombi kaLang Cum, wayedume kumazwekazi alithoba, ishumi lakwaMuong layishiya itrone kaNkskz. Xa uMnumzana Hoang walahlekelwa kakhulu eManh Thien, uMai nomyeni wakhe basweleka belandela iNkulumbuso phantsi komthi we-banyan. Igazi laba bantu babini lenza umthi wokuqala utyatyambe ngentwasahlobo yaloo nyaka. Emva koko umoya wasasaza i-stamens kuwo wonke ummandla ukuze zenze iindidi zerozi namhlanje.
Kubantu baseMntla-ntshona, zombini iintyatyambo zixabisekile “iintyatyambo zemifuno”. Izipho zikaTet zikabawozala eMuong Te, Pac Luong… ngaphandle kwe-banh chung, ikeyiki ye-swallowtail, ikeyiki yeqanda lembovane (uhlobo lweqebengwana elenziwe ngomgubo werayisi otyebileyo oxutywe namaqanda embovane ehlathini) zihlala zi-odolwa ngokutsha ” iintyatyambo kunye nemifuno”. bonisa intlonipho ephezulu.
iibhalkhoni ezidubulayo Intsapho efanayo kunye nentyatyambo yebhabhathane, ayinayo iphunga kodwa incasa, intyatyambo nganye inamacembe angama-4-5, i-pink stamens, imithambo emfusa. Izitamu zinencasa eswiti, zitsala izinambuzane ezininzi, ngakumbi iintlobo ezitya ubusi ezifana neenyosi kunye namabhabhathane. Igama elithi “hoa ban” ngolwimi lwaseThai lithetha “intyatyambo eswiti”, ezisisibizo kunye nesichazi. Iintyatyambo ze-Ban ziqhakaza kakhulu kwaye zihle kakhulu ekuqaleni kuka-Matshi, ukuya ekuqaleni kuka-Epreli, iintyatyambo ziqala ukubola. Xa utyatyambe ngokupheleleyo, umthi we-banyan ukhangeleka ngathi uneentyantyambo kuphela kodwa awunamagqabi. Abantu abakwiindawo eziphakamileyo bazigqala iintyatyambo njengekhalenda yabo yezolimo, batyala izityalo xa iintyatyambo zidubula baze batyale imbewu xa iintyatyambo zifa. Minyaka le, iintyatyambo zebanyan zidubula kuwo wonke umlambo, induli iphela, nakwihlathi liphela, ngaloo nyaka akunisi kakhulu imvula, kodwa akushushu kakhulu! Kwaye ngaloo nyaka abantu babengazikhathazi kangako ngembalela kwakunye nezikhukula.
Rhoqo ngonyaka, minyaka le, ngexesha leentyatyambo, abantu baseThai kwisithili saseMai Chau (Hoa Binh) bavula uMthendeleko weXen Ban, okanye uMthendeleko weXen Muong (owaziwa ngokuba yiBan Flower Festival) ukuthandazela amathamsanqa nokubeka iminqweno emihle. kubo.ubomi obunokuthula nobunempumelelo kwilali yaseMuong, kwaye kwangaxeshanye, ikwalithuba lokukhuphisana kunye nokonwaba, amakhwenkwe kunye namantombazana afunda kwaye azive ngokucula nokudlala.
Imbali yothando yeentyatyambo:
Intsomi yaseThailand ithi: Ngelo xesha, kwakukho inkwenkwe egama linguKhum eyayithandana nentombazana egama linguBan. UKhum lichule ekulimeni kwaye ukwalichule nokuzingela. UBan lichule ekwalukeni kwaye unelizwi elithimba abafana abaninzi. Nangona kunjalo, uyise kaBan, ngenxa yokuba wayenxanelwe ubutyebi, wamnika umtshato kunyana wentsapho yakwaMuong, owayengumfana olivila kunye nomkhwa we-hunchback.
Kwinqanaba lokugqibela uBan wabaleka waya kwilali yakuKhum ukuya kucela uncedo. Kodwa ngelishwa wathi efika kwaKhum waxelelwa ukuba ulandele uyise ukuya kuthenga inyathi kwenye ilali. Emva koko wathatha isikhafu sakhe, wasibophelela kwizinyuko zendlu yesithandwa sakhe, waza wabaleka ukuya kumfumana. Wemka kule ntaba waya kwelinye ihlathi, ebiza igama lesithandwa sakhe lada latshotshozela ilizwi, kodwa akazange alive limgama. Ekugqibeleni edinwe eyimfe, wawa emva kokuwela udederhu lweentaba eziphakamileyo. Apho walala khona, kwavela umthi weentyatyambo ovelisa amathupha amhlophe njengesandla sentombazana. Yaye kungekudala, ezo ntyatyambo zinwenwela kuzo zonke iintaba namahlathi akuMntla-ntshona, yaye nyaka ngamnye entwasahlobo, iintyatyambo zidubula zimhlophe njengomqhaphu. Abantu bayibiza loo ntyatyambo njengeentyatyambo zikaBan.
UKhum uthe akufika endlini wabona iqhiya yesithandwa sakhe sijinga ezitepsini, waqonda ukuba ikhona into engahambi kakuhle, wangxamela ukusifumana. Ehamba ngale ntaba, enye, ekugqibeleni, wadinwa wawa phantsi. Emva kokuba efile, waguquka waba yintaka ehlala yedwa ehlathini, kwaye minyaka yonke xa iintyatyambo ziqhakaza, wayecula njengobizo lwesithandwa sakhe.
Ukususela ngoko, xa kufika intwasahlobo, iintyatyambo ziyaqhakaza ezintabeni nasemahlathini, Son La amakhwenkwe kunye namantombazana bayamema omnye komnye ukuba baye kumthendeleko weentaba, bacule, badanise kwaye babonise uthando lwabo, njengokungathi bafuna ukuba nothando oluthembekileyo njenge Ban – Khum. Kwi-Son La, yonke intwasahlobo, iintyatyambo ze-banyan ziqhakaza kwiindawo ezithambekileyo zentaba, abafana kunye nabasetyhini kwiidolophana zaseMuong bamema ukuba baye kumthendeleko weentaba kwaye bathathe iintyatyambo ukubhiyozela intwasahlobo. Eli ikwalithuba lokuba amadoda namabhinqa aselula azonwabise, acule, adlale umtshingo, avuthele ixilongo, adanise, aphe kwaye afumane uthando.”
Intyatyambo nganye yothando ineengcambu zayo kumabali othando. Thandanani kodwa abanakuhlangana, bakhetha ukufa kunokuba bazithobe.
Okwangoku, kuluntu lwamaqela eentlanga eMntla-ntshona, kukho “iingcebiso” ezininzi zamabali anomxholo ofanayo ochaza imvelaphi yokuvinjelwa kweentyatyambo. Isalathiso kunye namagama abalinganiswa bamabali ahlukile, kodwa ayafana kuba asebenzisa intyatyambo yokuvalwa njengophawu lokuthembeka eluthandweni phakathi kwesi sibini.
Ngenxa yothando lwabo lweentyatyambo, oonyana neentombi zaseMntla-ntshona banqumla kumahlathi anenkungu bejonge kwiintyatyambo eziqaqambileyo njengeeperile, bakha iintyatyambo bazibeke ezinweleni zabo, bezisa neentyatyambo kwizalamane zabo ezisondeleyo ukuze zivule itheko. ixesha leentyantyambo.
Ngexesha lokuvalwa kweentyatyambo, xa besiya emaphandleni, abafazi badla ngokuza neentyatyambo, kungekhona ukuze badlale kodwa ukuze batye. I-Hoa ban ipheka isuphu, yenza i-mannequins, idibanise neviniga, i-chili kunye ne-bamboo amahlumela amuncu … luphawu olukhethekileyo lwentyatyambo ezinye iintyatyambo ezininzi ezingenayo. Intyatyambo ye-Ban ikwaliyeza elixabisekileyo lokunyanga ukhohlokhohlo olomileyo okanye umqala obuhlungu kakhulu. Abanye abantu basebenzisa amagqabi kunye namathupha amancinci omthi we-yellow star banyan ukunyanga isifo segazi ngokufanelekileyo.
Kwitreyi yoNyaka oMtsha, abantu baseThai bahlala besebenzisa iintyatyambo njengeentyatyambo ukulungisa iivasi ezibekwe esibingelelweni ngokungathi banombulelo kubazali abangasekhoyo. Ukuba yinkwenkwe okanye intombazana, babaliselana ibali lothando olusulungekileyo nolusizi lwe-Khum kunye noBan endala, baze bamemelane ehlathini ukuze bafumane iintyatyambo zeBan ezisanda kudubula. Babuyisela ngentlonipho kubazali babo nakwizithandwa zabo, kuba abantu baseThai bakholelwa ukuba intyatyambo emhlophe ecocekileyo yomibini iluphawu lokuhlonela abazali kunye nophawu lothando phakathi kwamakhwenkwe namantombazana.
Ban umnyhadala weentyatyambo:
I-Ban Flower Festival ngumthendeleko weqela laseThailand kuMntla-ntshona weVietnam. NgesiThai, “ukuvalwa” kuthetha okumnandi, okuhle. Yonke into emnandi kunye nenhle ibizwa ngokuba yi “ban”. Umthendeleko unentsingiselo ebalulekileyo kubantu baseThailand. Kulapho banqula uthixo wehlathi, uthixo womqolomba, nomphefumlo wesi sibini ngeentsomi, bethandazela imozulu entle nezityalo ezilungileyo. Ngokuqhelekileyo kubanjwe ngomhla we-5 kwinyanga ye-2.
Ibali lithi uKhom (ohlwempuzekileyo nokrakra ngesiThai) kunye noCao Lu (othetha isityebi) bathandana kodwa abazange bamkelwe ziintsapho zabo. Ngentwasahlobo, aba babini bamema ukuba badlale umqolomba weTham Dong Ngoang (umqolomba wehlathi, oko kukuthi iTham Le cave ngoku). Kungekudala emva koko, waziva efile waza waguquka waba nguTo Manh Lu (omnyama, omkhulu kunekhalane). UKhom wayengafuni ukunyanzelwa ukuba atshate nenye inkwenkwe eyayibalekele ehlathini. Wabaleka, wabaleka wabaleka, wadinwa wafela ehlathini. Apho wayelele khona, kwakhula umthi oneentyatyambo ezimhlophe, ivumba elimnandi, incindi emnandi. Abantu bayibiza ngokuba yiHoa Ban.
Loo ntyatyambo ivaliweyo idubula kanye entwasahlobo, ixesha apho uLu noKhom besiya kunye emqolombeni. Rhoqo ngonyaka, rhoqo entwasahlobo, iintyatyambo ezivaliweyo zidubula ezimhlophe kwiintaba zaseMntla-ntshona.
Bazisa iminikelo kumqolomba iTham Le. Lo msitho uquka ihagu, amasebe ambalwa okuvalwa komsebenzi, ukuvalwa kwentyatyambo, ibhotile yewayini, izitya ezibini zerayisi, izitya ezibini zerayisi, izinti ezimbalwa zesiqhumiso kunye nebetel nut neareca. Umlumbi wenza amadini koothixo bomqolomba nehlathi, ethandazela ukuba abantu baphile ubomi obunempumelelo nobunenkqubela.
Amakhwenkwe namantombazana aselula aqala ukonwabela umnyhadala wokuvunwa kweentyatyambo, echwayitisa ngemidlalo ekhethekileyo. Isandi esinyakazelayo sesandi sepi, isandi sesigodlo, isandi samagubu neegwali. Amakhwenkwe adlala ixilongo, amantombazana adanisa umdaniso weTham Le, umdaniso ozinikele ekuvuneni iintyatyambo. Amakhwenkwe akhuphisana ngokukhwela umthi we-banyan ukuze avune iintyatyambo. Umthi ngamanye amaxesha unokuba yi-5, 6 abantu abanyukayo. Ngezantsi, amantombazana athabatha imbiza (efana nengobozi) ukubamba iintyatyambo eziwisiweyo. Nawuphi na umfana othanda intombazana, mlahle apho. Nani mantombazana, ukuba niyamthanda, zama ukuthatha iintyatyambo zakhe.
Isiphelo ikwalixesha lokwahlukana kwamakhwenkwe namantombazana ukuhla ukuya kulima emasimini, intwasahlobo ikwalixesha lokulima. Ngoko ke, wonke umntu uzama ukukhuthazana ukuba aphume. Iingoma zesintu zaseThailand zithi:
Ukuba ufuna ukudlala, dlala ngelixa useneentyatyambo
Ukuqhula kukuqhula xa kusekho iintyatyambo ezininzi
Kungekudala iintyatyambo ziya kubuna
Intombi etshatileyo ibotshwe ngamatyathanga, ayisakwazi nokuhamba…
Indawo yomthendeleko incinci kakhulu, ngenxa yezinto ezikhethekileyo zophuhliso loqoqosho lwengingqi. Amahlathi amaninzi agawulwe ukuze akhonze uphuhliso kunye nemisebenzi ethile. Izizukulwana eziselula zazi ngaphantsi, xa umthendeleko ungabanjwa ngokuqhubekayo minyaka yonke.
Hoa ban – sắc trắng tinh khiết từ núi rừng Tây Bắc | Hatgiongtihon.net
Cách chăm sóc cây bạch tuyết | Hatgiongtihon.net